Ahoana ny fomba hahazoana fijery bebe kokoa amin'ny TikTok - Victor Mochere
Raha toa anay ianao dia mety ho variana amin'ny TikTok. Ny fampiharana fifampizaràna horonan-tsary fohy dia nahatonga ny Internet tamin'ny tafio-drivotra, ka olona an-tapitrisany no mampiasa azy io hamoronana sy hizarana horonan-tsary maharitra 15 segondra. Ary raha mitady ny lalao TikTok ianao dia mety hanontany tena ianao raha misy fomba hahazoana fijery bebe kokoa amin'ny horonan-tsaryo. Aza manontany tena intsony. Misy fomba vitsivitsy hahazoana fijery bebe kokoa momba ny TikTok, ary eto izahay hanome anao ny scoop.
Ahoana no ahazoanao fijery TikTok 1000?
Ahoana no ahazoako fijery bebe kokoa momba ny hack TikTok?
Ahoana no ahazoanao fijery amin'ny TikTok tsy misy mpanaraka?
Maninona aho no tsy mahazo fijery amin'ny TikTok?
Tsy misy tsiambaratelo hahazoana fijery bebe kokoa amin'ny TikTok - arakaraka ny votoaty vokarinao no mety ho hitan'ny mpijery. Saingy afaka manao zavatra vitsivitsy ianao mba hampitomboana ny fahafahanao ho hita sy hahazoana ireo fomba fijery manan-danja rehetra ireo.
1. Ataovy ho an'ny daholobe ny kaontinao
Mety ho toa tsy misy dikany izany, saingy ho gaga ianao hoe firy ny olona mametraka ny kaontiny ho an'ny tenany nefa tsy tonga saina. Raha mitokana ny kaontinao dia ny olona manaraka anao ihany no afaka mahita ny atiny.
2. Manaova horonan-tsary avo lenta
Azon'ny olona jerena kokoa ny horonan-tsary toa mahafinaritra sy mahasarika. Tsy misy olona te hijery horonan-tsary mankaleo, koa miezaha mba hampisongadina ny anao.
3. Mampiasà mozika malaza
Tsy azo lavina fa ampahany lehibe amin'ny TikTok ny mozika. Na manao molotra ianao, na mandihy, na miaraka amin'ny namana fotsiny, dia mety hisy hira mandeha any ambadika any. Ary na dia mety hieritreritra aza ianao fa mety ny mozika rehetra, ny fampiasana hira malaza dia fomba tsara hahazoana fijery bebe kokoa amin'ny TikToks anao. Nahoana? Eny, ho an'ny iray, tia mozika ny olona. Ary rehefa mahita TikTok napetraka amin'ny hira fantany sy tiany izy ireo dia azo inoana kokoa ny mijery izany. Ho fanampin'izay, ny fampiasana hira malaza dia afaka manampy ny TikToks ho voamarika ao amin'ny algorithm pejy 'Ho Anao'.
4. Mampiasà tenifototra mba hahatonga ny horonan-tsarinao ho hitan'ny olona maro kokoa
Rehefa mampiasa tenifototra mifandraika amin'izany ianao dia hiseho amin'ny valin'ny fikarohana ny horonan-tsarinao rehefa mitady votoaty toa anao ny olona.
5. Mampiasà bot mijery TikTok
Ny bot de view dia programa afaka mamorona ho azy ny fijerena ny horonan-tsaryo. Fomba haingana sy mora ahazoana maso bebe kokoa amin'ny atiny. Izany dia azo atao amin'ny alàlan'ny fampidinana programa view bot na mandoa serivisy bot tiktok view. Misy zavatra vitsivitsy tokony hodinihina rehefa misafidy botika fijerena. Ataovy azo antoka fa mifanaraka amin'ny TikTok ny bot mijery ary azo antoka ampiasaina. Ataovy azo antoka koa fa tsy mampiasa fomba fijery be loatra avy amin'ny bot view ianao, satria mety ho voarara ny kaontinao.
6. Miara-miasa amin'ireo mpampiasa TikTok hafa
Afaka manampy anao hahatratra mpihaino vaovao iray manontolo izany ary hahazo fijery bebe kokoa amin'ny horonan-tsaryo. Azonao atao ihany koa ny mampiasa ny duet an'i TikTok sy ny endri-javatra fanamby hahazoana fijery bebe kokoa.
7. Mandehana miaina
Tsy tsiambaratelo fa ny horonan-tsary mivantana no sasany amin'ireo votoaty be mpijery indrindra ao amin'ny TikTok. Ny horonan-tsary mivantana dia miteraka 6-10 heny kokoa noho ny horonan-tsary mahazatra. Noho izany, raha mitady fomba fijery bebe kokoa amin'ny horonan-tsary TikTok ianao dia ny mandeha Live no lalana tokony haleha. Ireto misy torohevitra vitsivitsy hanampy anao hahazo tombony betsaka amin'ny horonan-tsary mivantana:
Ampahafantaro mialoha ny horonan-tsarinao mivantana – Ataovy azo antoka fa ampahafantaro ny mpanaraka anao ny fotoana handehananao mivantana mba hahafahan'izy ireo mifikitra aminy. Azonao atao izany amin'ny alàlan'ny fandefasana fanisana ny tantaranao na fandefasana fampandrenesana fanosehana (raha manana mpanaraka 10,000+ ianao ). Mandehana mivantana miaraka amin'ny namana iray
Alefaso tsy tapaka – Hiverina hatrany ny olona raha toa ka mamoaka votoaty vaovao tsy tapaka ianao. Azonao atao koa ny manandrana mampiroborobo ny horonan-tsarinao amin'ny sehatra media sosialy hafa. Raha manana mpanaraka betsaka ao amin'ny Instagram na Twitter ianao dia zarao amin'izy ireo ny horonan-tsary TikTok mba hahazoana fijery bebe kokoa. Farany, mifandraisa amin'ny mpihaino anao ary miezaha hahazo azy ireo hizara ny horonan-tsaryo
Mba hahazoana fijery TikTok 1000 dia tsy maintsy mamorona votoaty mampientam-po sy mahasarika izay miresaka amin'ny mpihaino kendrenao ianao. Rehefa avy nanao votoaty lehibe ianao dia ataovy izay hizarana izany amin'ny fantsona media sosialy ary amporisiho ny hafa hijery sy hizara izany koa. Azonao atao ihany koa ny mieritreritra ny handefa doka sasany hampiroboroboana ny atiny ary hahatonga olona maro hijery azy.
Mandefa horonan-tsary mamorona sy tany am-boalohany - ny mpampiasa dia mety mijery sy mizara horonan-tsary misongadina kokoa. Mampiasà tenifototra mifandraika amin'izany - izany dia hanampy ny horonan-tsary ho hitan'ny mpampiasa liana amin'io atiny io. Ary farany, mifandraisa amin'ireo mpampiasa hafa - maneho hevitra sy tiay ny lahatsarin'ny olon-kafa, ary mety hahazo fijery sy mpanaraka bebe kokoa ianao.
Tsy misy valiny tokana hahazoana fijery amin'ny TikTok tsy misy mpanaraka. Mila manandrana tetika samihafa ianao hahitana izay mety aminao sy ny kaontinao. Ny fomba malaza dia ny fampiasana tenifototra, ny fiaraha-miasa amin'ireo mpampiasa hafa, ary ny fandefasana votoaty mahasarika. Tsarovy fa mila fotoana sy tsy miovaova ny fampitomboana kaonty ao amin'ny TikTok, koa aza kivy raha tsy mahita valiny avy hatrany ianao.
Raha tsy mahazo fijery amin'ny TikTok ianao dia afaka manao zavatra vitsivitsy hanovana izany. Voalohany, jereo raha toa ka natao manokana ny kaontinao. Raha izany no izy dia avereno ampahibemaso. Manaraka, ataovy azo antoka fa mandefa votoaty manara-penitra izay mahaliana sy mahasarika ianao. Mampiasà tenifototra ary asio marika ireo mpampiasa hafa ao amin'ny horonan-tsaryo mba hahazoanao fampandrenesana bebe kokoa. Farany, mifandray amin'ny mpampiasa hafa.
Raha mitady fomba fijery bebe kokoa momba ny TikTok ianao dia afaka manao zavatra vitsivitsy. Voalohany, ataovy azo antoka fa mahasarika ny horonan-tsaryo. Ny votoaty mahasarika dia hahatonga ny olona hijery sy hizara ny horonan-tsaryo. Azonao atao koa ny mampiroborobo ny horonan-tsarinao amin'ny sehatra media sosialy hafa hahazoana fijery bebe kokoa. Azonao atao koa ny mampiasa bots mijery raha mila valiny haingana ianao. Farany, ampiasao ny tenifototra sy lohahevitra malaza mba hahatonga ny videonao ho hitan'ny olona maro kokoa. Afaka mahazo fijery misimisy kokoa amin'ny horonan-tsary TikTok ianao amin'ny fanarahana ireto torohevitra ireto. Na inona na inona paikady ezahinao, mahaiza mamorona ary mifalia amin'ny atiny.